रमेशको बिहेको दिन कल्पना यस्तो ड्रेसमा Ramesh Prasai, Nanda Sing , Kalpana Dahal - Onlines Time
रमेशको बिहेको दिन कल्पना यस्तो ड्रेसमा Ramesh Prasai, Nanda Sing , Kalpana Dahal
सन् २०१६ मा मिस नेपालको नजिक पुगेर घर फर्कदाको क्षण कहिल्यै बिर्सदिनन् नम्रता । २ महिना रोएरै बिताइन् । ‘२ महिना सम्म रोएकी थिएँ । ताज पहिरिँदाको दिन त मलाई केही फरक परेको थिएन । तर त्यसको भोलिपल्टबाट लगातार आँसु झर्‍यो । धेरै मन दुखेको थियो,’ उनले पुरानो दिन सम्झिन् ।
परिवारले ढाडस दिए । अनि उनले आफूलाई बलियो बनाइन् । फेरि मिस नेपालमा फर्कने अठोट लिइन् । ‘अहिले अनुभवका हिसाबले पनि चार वर्ष भनेको धेरै हो नि । जिन्दगीलाई धेरै नियाल्न पाएँ । अलिकति परिपक्वता थपियो । अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जान सक्छु भनेर आफैलाई तयार पारें,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन् ।
मिस नेपालबारे थाहा पाउने भएपछि नै हो नम्रताले मिस नेपाल हुने सपना देखेको । कक्षा तीनमा पढ्दै गर्दा विज्ञान पढाउने शिक्षकले भविष्यमा के बन्छौ भनेर सोध्दा उनले जुरुक्क उठेर जवाफमा भनेकी थिइन्, मिस नेपाल । सानो बेलादेखि नै मिस नेपालतिर उनको झुकाव बढ्न थाल्यो । कक्षा ८ र ९ देखि यसबारे थप जानकारी बटुल्न थालिन् ।
सन् २०१३ मा इसानी श्रेष्ठ मिस नेपाल बन्दा आफू पनि मिस नेपाल बनेरै छाड्‍ने उत्साह थपियो । ‘उहाँ मिस वर्ल्डमा जाँदा मैले सबै कार्यक्रम हेरेको थिए । उहाँलाई मिस वर्ल्डको मञ्चमा देख्दा आँसु खसालेकी थिएँ । त्यसपछि मैले म मिस नेपाल बन्छु भनेर मनैदेखि सोचें,’ उनले सोचिन् ।
नोबेल एकेडेमीबाट १२ सक्नासाथ क्याम्पियन कलेजमा सोसल वर्क पढ्दै गर्दा सन् २०१६ मा उनी मिस नेपालमा पहिलो पटक सहभागी भएकी थिइन् । तर त्यो बेला अश्मी श्रेष्ठले मिस नेपालको ताज जितिन् । त्यतिबेलादेखि उनले आफ्नो कमजोरी सुधार्न थालिन् । सन् २०१७/१८ मा सोसल वर्क पढ्नमै व्यस्त भइन् ।
‘कहाँचाहिँ कमी भयो भनेर आफूलाई तयार गर्दै गएँ । चार वर्ष धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्यो । मेरो बोल्ने क्षमता राम्रो थिएन जस्तो लाग्थ्यो । त्यसमा सुधारें,’ २३ वर्षीया नम्रताले सुनाइन् ।
यो पटकको प्रतिस्पर्धा सजिलो भने थिएन । सबै प्रतिस्पर्धी प्रतिभाशाली थिए । प्रतियोगिताकै दौरान एक पटक शीर्ष ६ सम्म पनि पुग्दिन कि भन्ने लागेको थियो । ‘१९ प्रतिस्पर्धी एकदमै राम्रा थिए । नतिजा सोच्न नसकिने थियो । तर म खुशी छु । मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरुबीच मलाई ताज पहिर्याइयो,’ दंग पर्दै सुनाइन्, ‘चार वटा विधामा एउटा उपाधि जित्छु भन्ने आश लिएर आएकी थिएँ । तर अन्तिममा मेरो नाम नै विजेता घोषित भयो ।’
ग्रान्ड फिनालेको बिहान आमासँग उनले फोनमा कुरा गरिन् । आमाले घरमा होम राख्नु भएको रहेछ । ‘छोरीले जितोस् भनेर मागेकी छु’ आमाले उनलाई भनेकी थिइन् । ‘मेरो नाम घोषणा हुँदा ममाथि हेरेर भगवानलाई धन्यवाद दिँदै थिए । मैले सोचेको कुरा पूरा गरिदिनु भएकोमा भगवानलाई धन्यवाद दिएँ,’ उनी सुनाउँछिन् ।
लामो समयदेखि आफूले सोचेको सपना पूरा हुँदा फुरुङ्ग छिन् नम्रता । भन्छिन्, ‘त्यो बेला विजेताहरु एकदमै राम्रा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले जितिन् तर सायद यो वर्ष जित्ने पालो मेरो थियो, मैले जितें ।’
मिस नेपाल आउनु अगाडि नम्रताले किन्डरगार्डेनमा पढाउने गर्थिन् । शिक्षण पृष्ठभूमिबाट आएका कारण आफू त्यतै पनि सक्रिय हुने उनको योजना छ । समाजमा सकारात्मक्ता फैलाउनु र समाजको सेवा गर्नु उनको उद्देश्य हो । यसअघि पनि विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध भएर समाजमा स्वयमसेविकाको भूमिका निभाएकी छिन् नम्रताले । उनी लियो क्लबमा आबद्ध छिन् । अब उनको ध्यान मिस वर्ल्डको तयारीतिर तानिएको छ ।
मिस नेपाल हुनेहरु कतिले आफ्नो करियर फिल्मतिर पनि देख्छन् । निकिता चाण्डकले पछिल्लो उदाहरण हुन् । तर, नम्रताले तत्काल जाने सोचेकी छैनन् ।
नेवार समुदायकी सुन्दरीले मिस नेपाल जित्ने बित्तिकै कतिले नाक खुम्चाउँछन् । नम्रता आफूले नेवार मात्र नभएर क्षेत्री समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गरेको बताउँछिन् । ‘उपाधि जित्ने चारजनामा म र सुप्रिया मात्र नेवार समुदायकी हुँ । सन्ध्या शर्माले मधेश समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छिन्,’ उनले भनिन्, ‘मेरो आमा क्षेत्री हुनुहुन्छ । म क्षेत्री परम्परा अनुसार पनि हुर्कें । त्यसैले म नेवार हुँ र क्षेत्री पनि । मैले दुई समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु ।’
जिम्मेवारीका हिसाबले ताज कत्तिको गह्रौं छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘ताज गह्रौं नै छ । जिम्मेवारी धेरै छन् । सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने छ ।
Prevयस्तो निर्णय गर्न अकस्मात प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सर्वदलीय बैठक, अब के होला स्थिती ?
Nextरमेश प्रशाईकाे बिवाहमा एकासी रवी लामीछाने आउँदा माहाेल बिग्रीयाे र कलपनाकाे धमाकेदार डान्स ।।